Missing Pieces: မန်ယူခြေစွမ်းပြခဲ့သော - အာဆင်နယ် ၁-၃ မန်ယူ
မန်ယူခြေစွမ်းပြခဲ့သော - အာဆင်နယ် ၁-၃ မန်ယူ
ယမန်နေ့က ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့သော ပရီးမီးယားလိဒ် ပွဲစဉ် ၂၄၊ အာဆင်နယ်အသင်းနှင့်မန်ယူအသင်းပွဲစဉ်တွင် မန်ယူအသင်းက ၃ဂိုး ၁ဂိုးဖြင့်အနိုင်ရရှိသွားပါသည်။
ယခုပွဲစဉ်သည် နှစ်သင်းလုံးအတွက် အရေးပါသော ပွဲစဉ်ဖြစ်သည့်အတွက် နှစ်သင်းလုံး အကောင်းဆုံး Line-up ကိုရွေးချယ်ယှဉ်ပြိုင်သွားခဲ့သည်။
မန်ယူအသင်းတွင် ဂိုးသမား ဗန်ဒါးဆား၊ နောက်ခံလူ အီဗရာ၊ အီဗန်၊ ဘရောင်း နှင့် ရာဖေးလ် ဒါဆေးဗားတို့ကစားခဲ့ပြီး အလယ်တန်းတွင် စခိုးစ်၊ ကာရစ်၊ ဖလက်ချာတို့ ပါဝင်ခဲ့သည်။ ကစားကွက်အပြောင်းအလဲအနေဖြင့် ရွန်နီကို အထောင်တိုက်စစ်မှုးထားကာ တောင်ပံကစားသမားအဖြစ် ပတ်ဂျီဆန်နှင့် ယခင်ပွဲစဉ်များက ခြေစွမ်းပြခဲ့သော နာနီတို့ကို ကစားစေခဲ့သည်။
အာဆင်နယ်အသင်းတွင်လည်း ဗာမီလန်၊ ဂါးလပ်စ်၊ ဖာဘရီဂတ်၊ နာစရီ၊ အာရှာဗင်၊ ရာဆစ်စကီး စသဖြင့် လူစုံခဲ့သည်။
အာဆင်နယ်အသင်း အိမ်ကွင်းဖြစ်သောကြောင့် မန်ယူအသင်းကို ပထမပိုင်းအစတွင်ပင် ဦးဆောင်ဂိုးရအောင်ကြိုးစားခဲ့သော်လည်း ဂိုးပေါက်လွဲချော်နေသောကြောင့် ဂိုးမရသကဲ့သို့ မန်ယူအသင်းမှ ရွန်နီ၊ နာနီတို့၏ ဂိုးသွင်းချက်များမှာ လွဲချော်နေခဲ့သည်။
ထို့နောက် ပထမပိုင်း ၃၃မိနစ်တွင် မန်ယူအသင်းမှ နာနီက နောက်ခံလူ သုံးဦးကို ကျော်ဖြတ်ကာ ဖြတ်တင်လိုက်သော ဘောလုံးကို အာဆင်နယ်ဂိုးသမား အယ်မူနီယာပုတ်ထုတ်ရာ ကိုယ့်ဂိုးထဲကိုယ်သွင်းမိသွားသောကြောင့် မန်ယူ အသင်းပထမဂိုး ရရှိခဲ့သည်။
ထို့နောက် ၃၇ မိနစ်တွင် နာနီက ဆွဲပြေးလာသောဘောလုံးကို ရွန်နီဆီသို့ မြေလှိမ့်ဘောချပေးလိုက်ပြီး ရွန်နီက အမှားမရှိ ကန်သွင်းယူသွားသောကြောင့် ပထမပိုင်းအပြီးတွင် မန်ယူအသင်းက ၂ဂိုး ဂိုးမရှိဖြင့်ဦးဆောင်နေသည်။
ဒုတိယပိုင်းပွဲစပြီး ၇မိနစ်အကြာတွင် ပတ်ဂျီဆန်က တစ်ဦးတည်းဆွဲပြေးပြီး ဂိုးသွင်းယူသဖြင့် မန်ယူအသင်းက ၃ဂိုးပြတ်ဦးဆောင်နေသည်။ ထို့နောက်တွင် အာဆင်နယ်အသင်း ခြေပဂိုးရရန်ဖိကစားခဲ့သော်လည်း မိနစ် ၈၀ တွင်မှ ဗာမီလန်၏ ကန်ချက်သည် နောက်ခံလူ အီဗန်နှင့်ထိကာ လမ်းကြောင်းပြောင်းသွားသဖြင့် ဂိုးသမား ဗန်ဒါးဆား မဖမ်းနိုင်ဘဲ အာဆင်နယ်အတွက် ခြေပဂိုးတစ်ဂိုးပြန်လည် ရရှိသွားသည်။ ဒုတိယပိုင်းတစ်လျှောက် နှစ်သင်းစလုံး ဂိုးသွင်းခွင့်များစွာရသော်လည်း ဂိုးပေါက်လွဲချော်နေသောကြောင့် ပွဲအပြီးတွင် မန်ယူအသင်းက ၃ဂိုး ၁ဂိုးဖြင့်အနိုင်ရရှိသွားပါသည်။
ယခုနိုင်ပွဲကြောင့် မန်ယူအသင်းသည် ချယ်လ်ဆီးအသင်းနှင့် တစ်မှတ်အကွာမှလိုက်ပြီး ဆက်လက်ဖိအားပေးနေဆဲဖြစ်ပြီး အာဆင်နယ်အသင်းမှာမူ မန်ယူအသင်း၏နောက် တတိယနေရာတွင် ဆက်လက်ရပ်တည်နေဆဲဖြစ်သည်။
Uploaded by liverdeliverz. - More professional, college and classic sports videos.
Brought to you by နေတိုက်ရှိန်း at 10:14 AM
kelvin February 1, 2010 at 1:13 PM
Tks for your sharing!!
Top Ten - 1 Feb